Politika Fiarovana fiainan'olona - Lantonoara Of The Day
ny https://www.funneloftheday.com/ maka ho zava-dehibe ny fiainana manokana. Io politika fiainana manokana mamaritra ny inona no manangona ny mombamomba sy ny fomba ampiasana azy. Jereo ity primer politika fiainana manokana ny hianatra bebe kokoa momba ny fiainana manokana ny politika amin'ny ankapobeny.
Mahazatra Information Collection
Lohamilina tranonkala rehetra manara-maso fototra momba ny mpitsidika. Izany dia ahitana vaovao, fa tsy voafetra ho, IP adiresy, mpitety tsipiriany, timestamps ary manondro pejy. Tsy misy fanazavana izany dia afaka manokana hamantarana manokana ity Ndao ho mpitsidika. Ny vaovao dia fantarina ny fahazarana fitantanana sy ny fikojakojana tanjona.
Cookies sy ny loharanom Web
raha ilaina, ny https://Mampiasa www.funneloftheday.com/ mofomamy mba hitahiry fanazavana momba ny mpitsidika ny safidinao sy ny tantara, mba ho tsara kokoa hanompo ny vahiny sy / na hanolotra ny vahiny amin'ny namboarina votoaty.
Fehezo ny Privacy
Mariho fa afaka manova ny toe-javatra mba mankarary navigateur mofomamy raha manana olana fiainana manokana. Disabling mofomamy ho an'ny rehetra dia tsy toerana soso-kevitra araka izay mety hanelingelina ny fampiasana ny toerana sasany. Ny safidy tsara indrindra dia ny hahafahan'ny mankarary na mofomamy amin'ny isan-toerana fototra. Hevitra ny navigateur tahirin-kevitra ho an'ny torolalana mikasika ny fomba manakana mofomamy sy ny rafitra fanaraha-maso hafa. Zavatra lisitry ny tranonkala navigateur fitantanana rohy fiainana manokana koa ho mahasoa.
Olana na fanontaniana momba ny fiainana manokana io politika azo Nasaina [email protected] ho fanazavana bebe kokoa.